December 2020 – Amara News
လူရွှင်တော် ဟာသသရုပ်ဆောင် ဦးဧရာကွယ်လွန်…. ဦးဧရာဟာ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်ညက အောက်စီဂျင်ထိုးကျသွားလို့ ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီးမှာ ဆေးရုံတင်ခဲ့ရပြီး နောက်တစ်နေ့မှာပဲ Covid-19 Postiveအဖြေထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ရက် နေ့ မနက် ၃နာရီ ၃၉ မိနစ်မှာတော့ ဟာသသရုပ် ဆောင်ဦးဧရာဟာ ဆေးကုသမှုခံယူ နေရင်းကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၉ရက်နေ့ မနက် ၃နာရီ ၃၉မိနစ်မှာ …
ကိုဗဈကာကှယျဆေးကို တဈတိုငျးပွညျလုံးထိုးပေးသှားမယျလို့ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက ပွောကွားလိုကျပါတဘျ။နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက က “ကာကှယျဆေးကို တဈတိုငျးပွညျလုံးကို ကြှနျမတို့ထိုးပေးရမှာပါ။ကြှနျမတို့နိုငျငံမှာ ဘယျသူမှ မကနျြဖို့ပေါ့။ဒါတော့ ကြှနျမတို့ရဲ့ မူပါပဲ။ ဘယျသူ့ကိုမှ မခနျြခဲ့ဘူး။အားလုံးကို ကြှနျမတို့ကနပွေီးတော့ ကနျြးမာရေးအရကာကှယျမှုပေးဖို့ ကြှနျမတို့ စီစဉျပါတယျ။ဒါပမေယျ့ အားလုံးကို တဈခြိနျတညျးထိုးပေး နိုငျတာတော့ မဖွဈနိုငျပါဘူး။ဒါကွောငျ့ ဒီကာကှယျဆေးထိုးတဲ့အစီအစဉျ တဈနိုငျငံလုံးအတှကျ ပွီးမွောကျအောငျလို့ဆိုရငျ လနဲ့ ခြီပွီးတော့ကွာမှာပါ”လို့ ပွောပါတယျ။ …
[Zawgyi] ကလေးမမွေးခင် နာရီပိုင်းအလိုအထိ ကိုယ်ဝန်ရှိမှန်းမသိခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး Connie Whitton အမည်ရတဲ့အသက် (၁၉)နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ selfie ရိုက်ရတာ အလွန်သဘောကျတဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူမက ပေါင် (၅၀)လောက်ဝိတ်ကျသွားရာကနေ ရုတ်တရက်အကြာင်းပြချက်မရှိဘဲ ဝိတ်ပြန်တက်လာတာကြောင့် အံ့အားသင့်နေခဲ့ပြီး လူမှုကွန်ယက်ပေါ်ကို ဓာတ်ပုံတွေတင်နေခဲ့တာပါ။ သူမဟာ ခါးကိုက်တဲ့ဝေဒနာကို အဆက်မပြတ်ခံစားလာရတာကြောင့် ဆေးရုံကို ဆေးစစ်ဖို့သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခါမှကိုယ်ဝန်ရှိနေကြောင်း သိခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကို The …
မလှောငျပါနဲ့သားရယျ ရှကျစရာမဟုတျပါ ဝေးလံခေါငျသီတဲ့ ဒသေကနေ ဘုရားလာဖူးတဲ့ အဘှားတှကေို လူငယျတဈယောကျ ဓာတျပုံရိုကျပွီး မစူးစမျးမဆငျခွငျဘဲ Onlineပျေါ တငျလိုကျတယျ….. သူတငျလိုကျတဲ့ပုံက ခဏအတှငျးမှာပဲ ပွနျ့သှားပွီး တဈခြို့က လှောငျကွ တဈခြို့က မလှောငျသငျ့ကွောငျးပွောကွတာပေါ့။ ဒါကို အဲ့ဒီလူငယျက မသိသေးပါဘူး… အဲ့ဒီနောကျ အဘှားတှရှေိရာကို သှားပွီး အဘှားတဈယောကျကို သှားမေးတယျ……. လူငယျ > ဘှားဘှား တဈခုလောကျမေးပါရစေ? …
[Zawgyi] “ထူးခြားဆန်းပြာတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်မြင့်မားလှသည့် ရှေးဟောင်းရွှေထည်ပစ္စည်းများတွေ့ရှိ” စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မြောင်မြို့နယ် ကျောင်းဖြူကျေးရွာအနောက်ဘက် ဧရာဝတီမြစ်ဆိပ်ကမ်းအနီးတွင် ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလှသည့် ရှေးဟောင်းရွှေထည်ပစ္စည်းများကို ဒေသခံတစ်ဦးမှ တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု ကနဦး သိရှိရပါတယ်။ ရွှေသားချည်းသက်သက်ဖြင့် အနုလက်ရာပြောင်မြောက်စွာပြုလုပ်ထားသော ၄င်းရွှေထည်ပစ္စည်းများတွင် ရွှေနားဒေါင်းများ ရွှေဆွဲပြားများအပါအဝင် အခြားအမျိုးအမည် မခန့်မှန်းနိုင်သေးသော ရွှေထည်ပစ္စည်းများလည်းပါဝင်ပြီး ပျူခေတ်လက်ရာများဖြစ်နိုင်သည်ဟု (အကြမ်းမျဉ်း) ခန့်မှန်းထားကြပါသည်။ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအနုလက်ရာ ရွှေထည်ပစ္စည်းများတွေ့ရှိရသည့် ကျောင်းဖြူရွာသည် ဧရာဝတီမြစ်နှင့်ချင်းတွင်းမြစ်ဆုံရာ …
ညောငျရှေ – ခေါငျတိုငျလမျးမပျေါကကောကျယူရှငျးလငျးခဲ့ရတဲ့နှာခေါငျးစညျး Mask တှပေါ ( 3နာရီအတှငျးမှာအခုရေ 2000ခနျ့)တှရှေိ့ခဲ့တာပါ။တနရောလေးသာမကတမွို့လုံးအတိုငျးအတာ မှတနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာထိဆိုမတှေးဝံ့အောငျပါပဲဒီလိုစညျးကမျးမဲ့စှနျ့ပဈခဲ့တဲ့အထဲမှာသငျရောအပါအဝငျပါဘဲလား? Mask ဆိုတာ ရောဂါ ကာကှယျဖို့တပျဆငျရတာဖွဈလို့ အခုလိုလမျးမပျေါ ပဈခငျြရာပဈခဲ့ခွငျးအားဖွငျ့သငျရော သငျ့မိသားစုအပါအဝငျ လူသားအားလုံးအတှကျပါ အန်တရာယျမြားလှနျးလှပါတယျ။Covid ဆိုတဲ့ရောဂါဆိုးကွီး ကမ်ဘာမွပေျေါကအမွနျပြောကျကငျးသှားဖို့ ဆိုတာက ခုလိုMask တှကေိုစညျးကမျးမဲ့စှနျ့ပဈမနဖေို့ကလဲအရေးကွီးလှပါတယျ။ အတှအေ့ကွုံအရ မွို့ဝငျမွို့ထှကျ စဈဆေးတဲ့နရောတှရေဲ့အလှနျမှာMaskတှေ ပိုမိုတှရေ့တာကွောငျ့လူတှဟောစဈဆေးရေးဂိတျလှနျတာနဲ့ တနျးစှနျ့ပဈခဲ့ကွပုံပါပဲသကျဆိုငျရာတာဝနျရှိလူကွီးမငျးမြားအနဖွေငျ့နညျးလမျးကောငျးမြားရှာတှပွေီ့း ထိရောကျစှာတားဆီးအရေးယူနိုငျပါစလေို့ ဆန်ဒ …
စာဖတျပါ….. ကနြျော အရငျက Messenger မှာ စကားတှပွေောရငျးအခြိနျတှကေုနျခဲ့တာ… ဖုနျးဘတှေေ ကုနျခဲ့တာကို အရမျးနှမွောမိတယျ။ကနြျော သတိထားမိတယျ… လူတျောတျောမြားမြားက..စာပဗေဟုသုတတှထေကျ ပုံတှမှောlikeတှေ… comments တှေ ပိုမြားနခေဲ့တယျ။ ကနြျော အခုစာပတှေကေို ဖတျရတာမြားလာတော့…Messenger မှာ စကားပွောခြိနျ နညျးလာတယျ… စာပတှေကေို ဂရုစိုကျဖွဈလာတယျ။ကနြျော စာတှေ ဖတျတယျ ပွနျမှတျမိလာဆိုတော့…မမှတျမိပါဘူး …. ဒါပမေယျ့ ကနြျော့ မှတျဥာဏျတှေ…ကောငျးလာတယျ။ …
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် ကိုဗစ်ကို အပြင်မှာ စစ်မိလို့ အဖမ်းခံရတဲ့ ဆရာဝန်ကိစ္စ မြောက်ဥက္ကလာ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ပြောပြီ “လူသားဆန်စွာ ဆရာဝန်တစ်ယောက်အနေနဲ့တွေးပြီးရေးမယ်”အစိုးရဆေးရုံမှာပဲ စစ်မနေကြဘဲ ဘယ်ဆေးရုံ မှာစစ်ခွင့်ပေးမလဲ သေချာစိစစ် ဒီ Test Kit ပဲစစ်ရမယ် သတ်မှတ်။သူ့ဘာသာ တတ်နိုင်တဲ့သူက စစ်ပါစေပေါ့။ အခုလည်း စစ်ပေးတဲ့ဆရာဝန်ကိုဖမ်းတာထက် ပညာပေးပြီးပြန်လွှတ်ရမယ် မူကိုပြင်ပေးသင့်တာ။ Positive ဆို ဆိုင်ရာစစ်ပေးတဲ့ …
[Zawgyi] လန်ဒန်ရောက်မြန်မာ့ထောပတ် အီတလီနဲ့ ဂျာမနီကိုခရီးဆက်မယ် လန်ဒန်ပြည်သူတွေကတောင် စားကောင်းလွန်းလို့ အရသာကောင်းမွန်တယ်လို့ ချီးကျူးနေကြတဲ့ မြန်မာ့ထောပတ် ဟာ အီတလီနဲ့ ဂျာမနီရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကို ရပြီလို့ မြန်မာနိုင်ငံထောပတ်သီးစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်း ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ အီတလီနဲ့ဂျာမနီရဲ့ သံရုံးတွေကတဆင့် အခုကမ်းလှမ်းမှုဟာ မြန်မာ့ထောပတ်အတွက်တော့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပါ။အခုမှစကမ်းလှမ်းတာမို့ ဘယ်လောက်ယူမယ်၊ဘယ်လိုပို့မယ်ဆိုတာ ဆက်ဆွေးနွေးကြရအုန်းမှာပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လန်ဒန်ရောက်မြန်မာ့ထောပတ် ဟာ အီတလီနဲ့ ဂျာမနီကိုခရီးဆက်နိုင်ဖို့ …
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် “ ဖားအောက်တောရဆရာတော်ကြီး မိန့်တဲ့ အိမ်တစ်အိမ်မှာ စီးပွားရေးတွေပြေလည်နေရတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅)ချက် ” အိမ်တစ်အိမ်မှာ စီးပွားရေးတွေပြေလည်ပြီး စားဝတ်နေရေးတွေ ပြေလည်နေကြပြီဆိုကြပါတော့။ အိမ်သူအိမ်သားအားလုံးက ၁။ သူ့အသက်လည်း ဘယ်သူမှမသတ်ဘူး၊ ၂။ သူ့ပစ္စည်းလည်းဘယ်သူမှ မတရားမယူကြဘူး၊ ၃။ ကာမေသုမိစ္ဆာခေါ်တဲ့ မှားယွင်းတဲ့ အကျင့်တွေလည်း ဘယ်သူမှ မကျင့်ကြဘူး၊ ကိုယ်ကျင့်တရား သိပ်ကောင်းကြတယ်။ ၄။ …